အူဒွန် - ဝီကီပီးဒီးယား
Cookbook: အူဒွန် Media: အူဒွန်
အူဒွန် (饂飩?, うどん ဟုရေးသားလေ့ရှိ) ဆိုသည်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံ၌ စားသုံးမှုများသော အစားအစာ တစ်မျိုးဖြစ်သည့် ဂျုံခေါက်ဆွဲတုတ် (နန်းကြီးကဲ့သို့) ဖြစ်သည်။
အူဒွန်ကို ကာကီအူဒွန်ကဲ့သို့ ကာကီဂျီရူ (ဒရှိ၊ ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ မီရင်းဆန်ဝိုင် တို့ဖြင့် ပြုလုပ်လေ့ရှိသည့်) ဟုခေါ်သော အနံ့မွှေးမွှေး သားငါးပြုတ်ရည် ကျဲကျဲထဲမှာ ထည့်ပြီး ပူပူလေး မကြာခဏဆိုသလို သုံးဆောင်လေ့ ရှိကြသည်။ များသောအားဖြင့် ဟင်းရည်ပေါ်မှာ ကြက်သွန်မိတ်ကို ပါးပါးလေး အုပ်လေ့ ရှိသည်။ အခြားသော ဟင်းရည်ပေါ်အုပ်ပြီး သုံးဆောင်လေ့ရှိသည်တို့မှာ တန်ပူရာ၊ ပုစွန်၊ ကာကီယာဂဲ့ (တန်ပူရာ အစုံကြော်)၊ အာဘူယာဂဲ့ (သကြား၊ မီရင်းဆန်ဝိုင်၊ ပဲငံပြာရည်အကြည် တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အိတ်သဏ္ဌာန် တို့ဖူးအကြွပ်ကြော် တစ်မျိုး) တို့ဖြစ်သည်။ ကာမာဘိုကို (လခြမ်းသဏ္ဌာန် ငါးကိတ်မုန်) ကိုလည်း ပါးပါးလေးလှီးပြီး ထည့်လေ့ရှိပြီး အရသာအတွက် ရှီချီမီငရုတ်သီးမှုန့်ကိုလည်း ဖြူး၍ စားကြသည်။
ဟင်းရည် အရသာနှင့် အပေါ်မှ အုပ်၍ စားသည်တို့သည် ဒေသတစ်ခုမှ တစ်ခု မတူညီ ကွဲပြားကြသည်။ အညိုရင့်ရောင် ပဲငံပြာရည်အကြည်ဖြင့် ပြုလုပ်သော အညိုရင့်ရောင် ဟင်းရည်ကို ဂျပန်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းတွင် စားသုံးလေ့ရှိပြီး အညိုပျော့ရောင်ရှိသည့် ပဲငံပြာရည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အညိုပျော့ရောင် ဟင်းရည်ကို ဂျပန်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတွင် စားသုံးကြသည်။ အသင့်စား ခေါက်ဆွဲထုတ်များကို အရှေ့နှင့် အနောက်အတွက် မတူညီသည့် ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့် ထုပ်ပိုးရောင်းချသည့်ကို ကြည့်ခြင်းကို ဤသို့ စားသုံးကြသည်ကို သိသာထင်ရှားစွာ တွေ့နိုင်သည်။
၃ ဒေသအလိုက် ကွဲပြားမှုများ
၄ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် အူဒွန်
စာဖိုမှူးတစ်ယောက်မှ အူဒွန်ပြုလုပ်ရန် ဂျုံမုန့်ညက်ကို လိမ့်နေပုံ
အူဒွန်၏ မူလအစအကြောင်း များလှစွာသော အကြောင်းအရာများ ရှိသည်။
ပုံပြင်တစ်ခုတွင် အေဒီ ၁၂၄၁ ခုနှစ်က ရင်ဇိုင်း (Rinzai) ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သော အန်နီသည် ဆုန်တိုင်းပြည်မှ အမှုန်ကြိတ်သည့် နည်းပညာကို ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ အမှုန်ကြိတ်ထားသော သီးနှံများမှ အူဒွန်၊ ဆိုဘာကဲ့သို့ ခေါက်ဆွဲများနှင့် ပန်းကိတ်ကဲ့သို့ ဒေသခံများ စားသုံးသော အစားအစာများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်တွင် နာရာခေတ်မှ ဂျပန်သံအဖွဲ့သည် တန်မင်းဆက်ခေတ် တရုတ်ပြည်သို့ သွားသည့်အခါ မုန့် ၁၄ မျိုးကို ယူဆောင်သွားခဲ့သည်။ ထိုထဲမှ တစ်မျိုးကို ဆာကုဘဲ့ (索餅?) ဟုခေါ်ပြီး ဟေးအန်းခေတ်တွင် ပြုစုခဲ့သည့် အဘိဓာန်တွင် ရှင်ဆန်းဂျီဂျို (新撰字鏡?)မှာတော့ မူဂီနာဝါ (牟義縄?)ဟု ထိုမုန့်ကို စာရင်းထည့်သွင်း ထားသည်။ ထိုမူဂီနာဝါသည် ဂျပန်ခေါက်ဆွဲအမျိုးမျိုးတို့၏ မူလအစ ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော် ရှင်ဆန်းဂျီဂျိုထဲမှာ ဖော်ပြထားသော မူဂီနာဝါသည် ဂျုံနှင့် ဆန်မှုန့်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
အူဒွန်အတွက် နောက်ထပ်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်တွင် ခေါက်ဆွဲ၏ မူလနာမည်မှာ ကွန်တန်ဟုခေါ်ပြီး ဂျုံမှုန်ကို အချိုလေးထည့်ပြီး ပြုလုပ်ထားသည်။
နောက်ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သော ဆရာတော်ကုကိုင်းသည် ဟေအန်းခေတ်တွင် ရှီကိုကုကျွန်း၌ အူဒွန်ခေါက်ဆွဲကို စတင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ဆရာတော်သည် ၉ ရာစု အစောပိုင်းတွင် တန်မင်းဆက် တရုတ်ပြည်ကို သွားရောက်ပြီး ဗုဒ္ဓစာပေနှင့် ပတ်သက်သည်တို့ကို လေ့လာရန် သွားခဲ့သည်။ ဆာနုကီနယ်က အူဒွန်ခေါက်ဆွဲသည် ဆရာတော် ကုကိုင်းဆီမှ ပထမဆုံး စတင်ခဲ့သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုကြပြီး ဟာကာတတွင်မူ အူဒွန်သည် ဆရာတော် အန်နီ၏ နည်းကို အခြေခံ၍သာ ရရှိခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
အူဒွန်ခေါက်ဆွဲကို ဆောင်းရာသီတွင် ပူပူလေး သုံးဆောင်ကြ၍ နွေရာသီတွင် အေးအောင်ပြုလုပ်၍ သုံးဆောင်ကြသည်။ အဲဒိုခေတ်တွင် ဂျုံခေါက်ဆွဲတုတ်ကို အူဒွန်ဟုသာ ခေါ်ကြပြီး ဟင်းရည်နွေးနွေးဖြင့် သုံးဆောင်လျှင် နုရုမူဂီ (温麦?) ဟုခေါ်ပြီး အေးအောင်ပြုလုပ်ထားသော အမျိုးအစားကို ဟီယာမူဂီ (冷麦?) လို့ ခေါ်ကြသည်။
အေးအောင်ပြုလုပ်ထားသော အူဒွန် ဒါမှမဟုတ် အူဒွန်အသုပ်ကို ကြက်ဥလိပ်ကို ပါးပါးလေး လှီး၍လည်းကောင်း၊ ကြက်သားမွနှင့် သခွားသီး၊ မုန်လာဥနီ (မုန်လာဥနီအမျိုးအစားဖြစ်သည့် radish) တို့ဖြင့် ရောနှော၍ သုံးဆောင်ကြသည်။ အကြွပ်ကြော်ထားသော တန်ပူရာမှ လွဲလျှင် အပေါ်မှာ အုပ်ပြီး သုံးဆောင်သည့် အရာတို့ကို အရမ်းကြီး ကြာအောင် ချက်ပြုတ်လေ့ မရှိကြပါ။ ထို့သို့ ဟင်းလျာအများစုကို ဆိုဘာဖြင့် ပြင်ဆင်ချက် ပြုတ်လေ့ရှိသည်။
crowndaisy greens နှင့် eomuk (ငါးကိတ်) တို့ဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသော ကိုရီးယားစတိုင် အူဒုန်း (Udong)
ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ဂျပန်အူဒွန်ခေါက်ဆွဲ တကယ့်အရသာစစ်ကိုတော့ များလှစွာသော ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်များတွင် စားသုံးနိုင်ပြီး ကိုရီးယားစတိုင် အူဒွန် ခေါက်ဆွဲပြုတ်ကိုတော့ ဘင်ရှီး (snack bars) နှင့် ပိုချန်းမာချာ (လမ်းဘေးဈေးဆိုင်) တို့တွင် စားသုံးနိုင်သည်။ နှစ်မျိုးစလုံးကို ကိုရီးယားဘာသာဖြင့် အူဒုန်း (우동) ဟုခေါ်ဆိုပြီး ဂျပန်ဝေါဟာရ အူဒွန် (うどん) မှ ဆင်းသက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုရီးယားတွင် အူဒုန်းမှာ ခေါက်ဆွဲအစားအစာ (အထူးသဖြင့် ခေါက်ဆွဲပြုတ်)ကို ရည်ညွှန်းလိုခြင်း ဖြစ်ပြီး ခေါက်ဆွဲကြီးသက်သက်ကို အုဒုန်းမြန် (우동면; "အူဒုန်း ခေါက်ဆွဲ") လို့ခေါ်ပြီး ဂါရက်ဂုဆု (가락국수; "ခေါက်ဆွဲလုံးတုပ်") အမျိုးအစားတစ်မျိုးကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ အတူတွဲဖက် စားသုံလေ့ရှိသည်မှ ဒေစီရွက် (crowndaisy greens)နှင့် အော့မု (ငါးကိတ်)တို့ဖြင့် ဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင် သုံးဆောင်သည်နှင့် အများကြီး ကွဲပြား၍ မနေပါ။
ဂျပန်တို့ရဲ့ လက်အောက်ခံ ဖြစ်ခဲ့ဘူးသော ပလောင်းနိုင်ငံတွင်လည်း အူဒွန်လို့ခေါ်တဲ့ ခေါက်ဆွဲတစ်မျိုးကို စားသုံးကြသည်။ ဂျပန်အူဒွန်ကဲ့သို့ ဟင်းရည်မှာလည်း ပဲငံပြာရည် အကြည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ အိုကီနာဝါမှ လာရောက်နေထိုင်ကြသူများသည် အိုကီနာဝါဆိုဘာကဲ့သို့ ဟင်းရည်ပြုလုပ်လေ့ သိပ်မရှိကြချေ။ ခေါက်ဆွဲကို စပါဂတီခေါက်ဆွဲ ပြုလုပ်သကဲ့သို့သာ အလွယ်တကူ ပြုလုပ်၍ စားကြသည်။
Baggage counter mark withabowl of udon andamenu.
ကာဂါဝါ စီရင်စုနယ်သည် ဂျပန်တနိုင်ငံလုံးတွင် ဆာနုကီ အူဒွန် (讃岐うどん?) အကောင်းဆုံးဟု ကျော်ကြားသော နယ်ဖြစ်သည်။ အူဒွန်အား ရုပ်ရှင်များတွင် အဓိကအကြောင်းအဖြစ် ထည့်သွင်းရိုက်ကူးခြင်း၊ အူဒွန်နှင့် ပတ်သက်သော အမှတ်တရပစ္စည်းများပြုလုပ်၍ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အခြားသော ဒေသများတွင်လည်း အဓိကအကြောင်းတရာတစ်ရပ်အဖြစ် အရေးပါမှုကို မြှင့်တင့်ခဲ့ကြသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ udong။ National Institute of Korean Language။ 24 February 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 November 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UDON - 作品 - Yahoo!映画။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အူဒွန်&oldid=696611" မှ ရယူရန်
ဂျပန်ဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။